इन्टरनेट स्लो छ ? स्पिड कति छ ? किन दिदैन भनेजति स्पिड ? कारण यस्तो छ – Sudarshan Khabar
नेपालमा किन पाइँदैन भनेजति इन्टरनेट स्पिड कारण यस्तो छ
नेपालमा इन्टरनेटको गति ज्यादै कमजोर छ । ग्राहकसँग सम्झौता गरेको जति इन्टरनेटको गति दिन सेवा प्रदायकहरु असफल छन् । इन्टरनेट चलाउँदा ब्राउजर फनफनी घुमेपछि ग्राहकले सेवा प्रदायकसँग गुनासो त राख्छन्, तर समाधान पाइहाल्दैनन् ।आफूले भनेजति इन्टरनेटको स्पिड पाउनु ग्राहकको अधिकार हो । तर, यसमा सेवा प्रदायकले पनि धिमा गतिको इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीलाई कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यस्तै भायनेट कम्युनिकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले इन्टरनेट स्लो हुने उपभोक्ताको गुनासो कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने बताए । ‘अहिले टिकटकको कारण नै इन्टरनेट स्लो भएको छ । भोलि यस्तै अर्को एप आउला । धेरे इन्टरनेट खपत गर्ने साइट आउला । त्यो बेला पनि इन्टरनेट केही स्लो हुन सक्छ । त्यसैले यसको गुनासो पूर्ण रुपमा समाधान हुन सक्दैन । हामीले कम गर्दै लैजाने हो,’ बोहोराले भने । अहिले ८० प्रतिशत इन्टरनेट खपत भिडियोेमै रहेको र यो बढ्दो क्रममा रहेकाले आउँदा दिनमा कसरी गुणस्तरीय इन्टरनेट दिने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बोहोराको भनाइ छ ।
त्यस्तै भायनेट कम्युनिकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोरले कोरोनापछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई झनै ठूलो समस्या परेकेा बताए । ‘इन्टरनेटको माग धान्नै नसक्नेगरी बढेको छ, हाम्रा उपकरण बिगि्ररहन्छन् । यस्तो बेलामा विदेशबाट आउने चार्टर जहाजमा सामान ल्याउन समय लाग्छ । भनेको बेलामा जनशक्ति पाइँदैन । कोरोनापछि हामी थप समस्यामा छौं,’ बोहोराले भने ।
इन्टरनेट स्पिड जान्न धेरै गाह्रो छैन । लाइन कनेक्सन वा वाइफाईदेखि कुनै पनि नेटवर्कमा कनेक्ट भएपछि त्यस नेटवर्कको स्पिड सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । इन्टरनेट स्पिड जाँच्ने थुप्रै मोबाइल एप्स, वेब एप्स, डेक्स्टपएप्स डेभलप भइसकेका छन् । तीमध्य ‘स्पिडटेस्ट डट नेट’ र भर्खरै केही महिनाअगाडि अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा प्रदायक कम्पनी नेटफ्लिक्सद्वारा डेभलप गरिएको ‘फास्ट डट कम’ सजिलो र भरपर्दो वेब एपमध्ये मानिन्छन् । ‘स्पिडटेस्ट डट नेट’ एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै मोवाइल अपरेटिङ सिस्टमलाई पनि उपलब्ध छ । साथै गुगल क्रोम प्रयोगकर्ताहरूले यस वेब एपको एक्स्टेन्सन क्रोम वेब स्टोरदेखि फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छन् । आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरदेखि ‘स्पिडटेस्ट डट नेट’ वा ‘फास्ट डट कम’ खोलेर सजिलै आफ्नो इन्टरनेट स्पिड पत्ता लगाउन सकिन्छ । यी दुई एपले दिने स्पिड रिपोर्टमा अंकहरू धेरै थोरै फरक देखिन सक्छन् ।
‘फास्ट डट कम’ले आफ्नो नेटफ्लिक्स सर्भरदेखि केही फाइल डाउनलोड गरेर कनेक्सन स्पिड चेक गर्छ भने ‘स्पिडटेस्ट डट नेट’ले नजिकैका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले होस्ट गरेका सर्भरको सहायता लिन्छ । नजिकैको सर्भरदेखि फाइल डाउनलोड गर्ने हो भने अवश्य धेरै स्पिड पाइन्छ । त्यस कारण ‘स्पिडटेस्ट डट नेट’मा नजिकको होस्ट चेन्ज गरेर नेपालभन्दा बाहिरका सर्भर छानेर स्पिड चेक गर्ने हो भने आफूले पाइराखेको इन्टरनेट स्पिडको (डाउनलोड र अपलोड) जानकारी लिन सकिन्छ ।
‘फास्ट डट कम’ले भने डाउनलोड स्पिडमात्रै चेक गर्छ । आफूले पाइरहेको स्पिड ८० प्रतिशतभन्दा कम छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग तुरुन्तै गुनासो राख्नु मनासिब हुन्छ । गुगल, म्यासेन्जर, फेसबुक चलेकै छ भनेर चुप लाग्नु आफैंलाई घाटा पुर्‌याउनु हो ।
मल्टी राउटर ग्राफ उपलब्ध गराउन आइएसपीलाई निर्देशन, ‘ग्राहकलाई पाइरहेको नेट स्पीड चेक गर्न देउ’
इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरप्रति ग्राहकको गुनासो आउने क्रम बढेपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए)ले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई एआरटी (मल्टी राउटर ट्राफिक ग्राफ) उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। तिरेको शुल्कअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन र आफूलाई दिइएको इन्टरनेटको गति ग्राहकले जाँच गर्न पाउने व्यवस्था गर्न एनटीएले आइएसपीहरूलाई भनेको हो। यसका लागि प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यो व्यवस्था लागू गरिदिएपछि ग्राहकले आफूले चलाउँदै आएको इन्टरनेट सेवाको प्याकेज, भोलुम र स्लो भएको अवस्था लगायत सबै जानकारी लिन सक्ने एनटीए प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘इन्टरनेट सेवाग्राहीको गुनासो पहिलैदेखि आइरहेको हो। हामीले यसअघि पनि सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मौखिक रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर लागू भएको पाइएन। त्यसैले लिखित सूचना नै प्रकाशित गर्नु परेको हो।’ सेवाग्राहीले तिरेको शुल्कअनुसार सेवा पाउनु पर्ने र पाएको सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न पनि पाउँदा कारोबार पारदर्सी हुने उनले बताए। ‘यसमा हाम्रो नियमित अनुगमन रहनेछ,’ उनले भने।
इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकले एमआरटिजी ग्राफमार्फत इन्टरनेटको गति र समयअनुसारको डाटा खपत लगायत जानकारी लिन सक्ने उनले बताए। मल्टी राउटर ट्राफिक ग्राफर नेटवर्क फ्री सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयरमार्फत नेटवर्क लिंकअन्तर्गत ट्राफीक लोड मापन र अनुगमन गर्न सकिन्छ। एआरटीमार्फत आफूले पाइरहेको नेटको गुणस्तर थाहा पाउन सक्दा आइएसपीविरूद्ध ग्राहकका गुनासा घट्ने एनटीएको अपेक्षा छ। नेटको स्पीड आफूले पैसा तिरेअनुसारको नपाएको गुनासो आउने क्रम लकडाउनका अवधिमा एनटीएमा निकै बढेको छ।